Ubuntu dia mety ho Rolling Release eo anelanelan'ny kinova LTS | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fitsinjarana, GNU / Linux
Efa mandeha toy ny afo mando amin'ny Internet ny vaovao izay entiko anao, ary rehefa tonga izany Ubuntu ny fiantraikan'ny haino aman-jery dia voamarika amin'ny sisa amin'ireo fizarana. Fa ireto misy fomba fijeriko vitsivitsy momba an'io.
Tombontsoa sy lafy ratsy.
Raha hitantsika amin'ny toeran'ny mpampiasa izany dia ho tombony daholo ny zava-drehetra. Ny mety fandefasana «kinova vaovao an'ny Ubuntu»Isaky ny roa taona, fotoana lava be tsy mila mamolavola ny PC ary hahatratra ny fitoniana amin'izany.
Mandritra izany fotoana izany dia manohy mandray vaovao farany avy amin'ny voam na ny sisa amin'ireo programa izay ampiasaintsika matetika, mifanaraka amin'ny fe-potoana Famotsorana Rolling. Ary hatreto dia tsara tarehy be ny zava-drehetra.
Etsy ankilany, mbola tsy nisy voalaza mazava momba an'io hevitra io ary tsy haiko raha Canonical (tsara kokoa hoy tamin'i Dadatoa Marka) tianao ny hevitra, na ireo rehetra "mampiasa vola" amin'ity fizarana ity, satria mazava ny fampiroboroboana ny fivoahan'ny Ubuntu izay hitantsika matetika isaky ny 6 volana.
Heveriko fa ho fanampin'izany, ity dia mety hanana antony hafa ao ambadika mifandraika OS an'ny telefaona Ubuntu. Heveriko fa tsy mora ny miaritra ny fivoarana sy ny famoahana tsingerina eo anelanelan'ny kinova ho an'ny fanontana PC sy finday, ary manana 2 taona eo anelanelany sy fanavaozana tsy tapaka, satria tsy dia sarotra ny asa.
Fa ny hevitro fotsiny izany ary angamba miteny akorandriaka aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ubuntu dia mety ho Rolling Release eo anelanelan'ny kinova LTS
Faly aho hehe, mbola miloka amin'ny ubuntu mihoatra ny distros hafa aho ary mieritreritra fa izany no ho tsara indrindra.
Faly kokoa aza aho miaraka amin'i Arch, alaivo an-tsaina hoe miaraka amin'ny Ubuntu Rolling ianao 🙂 manatsara kely fotsiny ny Unity, izay heveriko fa tena tsara. Raha ny fahitako azy dia milamina kokoa noho ny famoahana teboka ankehitriny, mahaliana ny mahita ny Canonical mampakatra ireo fonosana ho fitsapana ary avy eo mankany Main. Heveriko fa ity dia hampiakatra ny quota fametrahana Ubuntu.
Raha miresaka desktops isika, mazàna dia nampiasa xfce sy lxde aho, izao dia mampiasa kde sy ny firaisan-kina satria ratsy ny distro rehetra.
Manana Unity aho amin'ny fitsapana Archlinux, ary mandeha tsara ...
Tsara ho fantatra izany, indray andro any mila mampiasa firaisankina mandritra ny 1 volana mahery aho hehe.
Torohevitra tsara iray nolazainao momba ny enta-mavesatra, raha misy distro efa eo aminy isaky ny 6 volana ny asa tsy vita 100% polishing, dia ho ratsy kokoa raha toa ka manampy asa hafa toy ny fangatahan'ny telefaona Ubuntu izy ireo.
Mikasika ny dokam-barotra dia tokony raha te-hanaparitaka ny ditro manokana amin'ny telefaona ubuntu izy ireo, satria raha manao asa tsara izy ireo, ny mpanjifa farany, afa-po amin'ny fahombiazan'ny finday, dia miloka avy hatrany amin'ny fametrahana Linux amin'ny solosain'izy ireo. .
Fa raha tsy mahomby izy ireo ary mahita tsy fetezan'ny mpanjifa, dia veloma mba hitondra mpanaraka hampiasa rindrambaiko maimaimpoana. Mety hanana hevi-diso momba ny linux izy ireo, ary handoa iray ny disro rehetra.
(Ataovy ao an-tsaina fa ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa windows na dia manana olana arivo amin'ny solosain'izy ireo aza ianao dia efa fantatrao ilay fomba fiteny hoe: "tsara fantatra ratsy toy izay tsara ho fantatra")
Manantena fotsiny aho fa mahomby amin'ity tetik'asa ity izy ireo ary noho izany dia fantatry ny olona maro ny tontolon'ny linux.
Tiako io fotokevitra io amin'ny ankapobeny, heveriko fa zavatra napetrak'i Cannonical ary nandoa vola amin'izany. Ny variant an'ny LTS dia tena tsara sy milamina, manome ny sehatry ny fandrosoana safidy tsara kokoa (raha tsy Red Hat sy Novell ihany no jerena). Android sy iOS no mpanjaka ka ho sarotra be ny lahasa ho an'ny ekipa Cannonical, ka hitako fa tena mety hifantoka amin'ny LTS izy ireo miaraka amin'ny fanavaozana isaky ny 6 volana. Izay no eritreretiko ary na dia tsy mampiasa an'ity distro ity aza aho dia manantena aho fa hahita fahombiazana tokoa izy ireo.
«... fotoana lava be tsy mila mamolavola ny PC ary hahatratra ny fitoniana amin'izany.»
Eny, tsy adidy ny mametraka ny kinova Ubuntu vaovao indrindra eo anelanelan'ny LTS tsirairay, azonao atao ny manohy azy mandra-pivoak'ilay manaraka ... ary anio dia hahatratra 2 LTS ny fanohanana.
Ireo kernel dia manohy manavao sy ny ankamaroan'ny rindrambaiko, ny tsy miova dia ny birao sy ny rindrambaiko miankina aminy.
Tsy hitako izay lavitra ny mety hanaovana an'izany, ary ny famoahana ilay rindrambaiko rehefa vonona izy, ary tsy maika ny hamoaka kinova isaky ny 6 volana.
Betsaka ny zavatra tokony hoeritreretinao raha te hanao izany ao amin'ny Canonical ianao. Tsy ratsy velively ny hevitra, ary raha ny marina dia tombony madio ho an'ireo mpampiasa izany raha vita tsara.
Aza adino fa ny fanovana kernel dia tsy ny tsara indrindra hatrany amin'ny resaka mpamily tompony sy ny olana mety haterak'izany amin'ny ambaratonga fampiasana maro; azo atao izany, saingy tsy maintsy atao tsara.
Eny, mety ho izy io, ny iray miorina (LTS) ary ny fitsapana na sid (Rolling) hafa
Hmmm, mbola tsy azoko mihitsy hoe momba an'i Debian Squeeze, Wheezy ary Sid, misy olona afaka manazava izany amiko?
Debian presse no anaran'ny sampana marin-toerana ankehitriny (Debian 6).
Wheezy no anaran'ny sampana fitiliana ankehitriny (ny sampana miorina amin'ny ho avy, izany hoe: Debian Wheezy dia Debian 7)
Ary ny sid dia ilay sampana tsy milamina
Ahhh sahady. Iray amin'ireo zavatra tsy hainao io fa mamaky matetika matetika ianao ary tsy mbola nanome anao hanontany ny dikan'izany. Misaotra 🙂
Mahaliana, manontany tena aho hoe inona no hataon'ny sekoly fanabeazana fototra sy ny mint.
antenaina hiova base.
na dia mbola azon'izy ireo atao aza ny ekipa Manjaro
Eny, miankina amin'ny LTS tanteraka ny fanabeazana fototra, ary koa ny manampy ny rindrambaiko manokana.
Mitovy ihany, fa tsy ho isaky ny 6 volana intsony ireo kinova, manomboka amin'ny 14.04 dia hamoaka 17 izy ireo, ary avy eo 18 rehefa mivoaka ny Ubuntu 16.04 ...... na ajanony ny zavatra ary raiso ny lalanao manokana tahaka ny nataonao Ubuntu , izay na dia mbola miorina amin'i Debian aza, dia manana fahaleovan-tena ampy na amin'ny rindrambaiko na amin'ny trano fitahirizana.
Izaho manokana dia aleoko ny fizarana dia lasa Rolling Release, noho izany izahay dia mila manavao hatrany ny rafitra miaraka amin'ireo kinova farany napetrak'izy ireo ary tsy hiandry 6 volana ny fanavaozana tanteraka.
Canonical dia handresy amin'ny asa kely kokoa. Olana amin'ny kernel 3.xx, -xx, avy eo ireto manaraka ireto. Tsy mila misahirana manangona na inona na inona ianao fa misintona ny asa fampandrosoana hafa fotsiny ho an'ny hafa.
Aza manao hadisoana, ny Formule Rolling dia mahazo aina ho an'ireo izay mitazona ny diso.
@Elav Heveriko fa tsy hisy fiatraikany amin'ny fampiroboroboana izany. Ubuntu dia efa milamina izao, ary ny fampiroboroboana tsara indrindra azon'izy ireo ankehitriny dia ny fisian'ny fampiharana manokana kokoa ho an'ny Ubuntu sy solosaina misy fametrahana mialoha. Raha tsy mijery an'i Microsoft ianao, izay tsy mila mametraka Windows isaky ny 6 volana eo, mino aho fa tokony handeha amin'ny toeran-kafa izao ny dokam-barotra.
Manazava aho fa manonona ny fangatahana ho an'ny Ubuntu amin'ny marika aho, hoy aho, mba tsy hisy hihevitra fa mieritreritra aho fa Linux no Ubuntu.
Tsy dia azoko loatra izany fa raha manana cycle cycle 2 taona izy dia tsy mihodina io. -> Manana tsingerin'ny famoahana izy, lava nefa izy.
Tsy marina .. Ho vaovao foana ianao ary rehefa mivoaka ny kinova vaovao dia mila manova ny anarana fotsiny ianao ao amin'ny lisitra loharano. Izany hoe, tsy toy ny alohan'ny fanavaozana ny kinova iray mankany amin'ny iray hafa, tsy maintsy naka fonosana 1GB ianao ..
Efa ho avy izany.
Helena dia hoy izy:
farany amin'ny ubuntu dia mieritreritra zavatra mety izy ireo, ny tiako holazaina dia hoe, 😀
Mamaly an'i Helena
Adikao amin'ny repian ny repo ary ankehitriny ny tsimbadika famotsorana. Oh Wannabes ..
Mikasika ny olan'ny mpamily sary, ny ohatra tsara indrindra amin'ny fanaovana an'io amin'ny fomba tsara indrindra dia ny tetikasa Chakra, manana nvidia tafiditra aho ary rehefa nohavaozina ny kernel, ny fanavaozana ny mpamily sy ny xorg tsirairay avy dia mahita olana tsy mifanaraka ihany koa.
Raha manao izany izy ireo dia tsy hanana tantara an-tsehatra, ary izaho manokana dia nisafidy ny hampiasa distros mihodina, satria tsy maintsy manavao isaky ny 6, 8 na 9 volana aho, na dia 1 taona aza dia tsy misy dikany amiko.
Efa fantatra fa Rolling Release Rulez, indray andro any dia hijanona eo ambanin'io maodely io na eo ambanin'ny semi-mihodina ny rafitra rehetra. Amin'izany dia mila repository mpampiasa AUR karazana i Ubuntu mba tsy hiankina amin'ny PPA, ary angamba mety ho akaiky Haavon'ny andohalambo.
Stif dia hoy izy:
Araka ny nolazain'i @nano
Hevitra tsara nefa tsy maintsy atao tsara ary heveriko fa somary milamina kokoa i Ubuntu amin'izany.
Mamaly an'i Stif
Mieritreritra aho fa ny zanakavavin'ny ubuntu dia handray lalana iray ihany raha toa ka mandray ny lalan'ny famotsorana i ubuntu.
Safe sy arch dia hamoaka kinova azo antoka lts
Gentoo Linux Torolàlana momba ny fametrahana tsikelikely